बच्चाहरूलाई स्वस्थ राख्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् - Sutra News
कोरोना अवधिका कारण पछिल्लो डेढ वर्षदेखि विद्यालयहरू खुला छैनन् । बच्चाहरू घरमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको शारीरिक गतिविधि पनि बन्द भएको छ । यस कारण धेरैजसो बच्चाहरूमा मोटोपनाको समस्या बढ्दैछ । अधिकांश अभिभावकहरू यसका बारे चिन्तित छन् । यसको मतलब यो होइन कि बच्चाहरूलाई आहार बनाउनु पर्छ । जब उनीहरू ठूलो हुँदै जान्छन्, तिनीहरू खाने विकारहरूको जोखिममा छन् ।
वास्तवमा बच्चाहरूले आफ्नो खाली समयमा केहि वा अरू खाँदैछन् । यसले मोटापा बढाउँदछ । यो देखिएको छ कि जे पनि तपाईं बच्चाहरूलाईं खानबाट रोक्नुहुन्छ, उनीहरूले त्यो अधिक खानेछन् । त्यसकारण बच्चाहरूमोटापा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
राम्रो खाना पनि बच्चाहरूको राम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ । यो प्रोटीनयुक्त भोजन दिन लाभदायक छ । मसूर, अण्डा, दूध, तरकारीमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटीन हुन्छ, तर बच्चाहरू जंक फूडबाट टाढा राख्छन् ।
बच्चाहरू पर्याप्त निद्रा दिनुहोस् । साना बच्चाहरू खेलको दौडान धेरै चाँडो थाक्छन् । यही कारणले गर्दा तिनीहरू अध्ययनको क्रममा निदाउँछन् । यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूलाई निद्रा पूर्ण गर्न दिनुपर्दछ ।
कुनै पनि रोग फोहोरबाट सुरु हुन्छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई बाल्यावस्थादेखि नै सफाईको बारेमा सिकाउनुहोस् । उनीहरूलाई समयमै नङ काट्न प्रेरित गर्नुहोस्, दाँत, हात र खुट्टा सधैं सफा राख्नुहोस् ।
बच्चाहरूको शारीरिक विकासको लागि, उनीहरू खेल्न आवश्यक छ । खेल्नाले बच्चाको उचाइ बढ्दै जाँदा शरीरलाई बल दिन्छ । त्यसैले उनीहरू पनि खेल्न निश्चित गर्नुहोस् ।
तिनीहरूलाई पनि अनुसरण गर्नुहोस्
१. बच्चाहरूले बाहिर फास्ट फूड लिन बन्द गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले घरमै यसको माग गर्न थालेका छन् । आमाले आफ्नो फास्ट फूड सेवन नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, किनकि यसको अत्यधिक सेवनले कब्जको समस्या निम्त्याउँछ । एक महिना मा एक वा दुई पटक तिनीहरुलाई स्वस्थ फास्ट फूड खुवाउनुहोस् । उदाहरण को लागी, पिठ पिज्जा, नूडल्स, पास्ता बर्गर आदि बढि तरकारीहरू थप्न सकिन्छ तर सन्तुलित मात्रामा मात्र दिनुहोस् ।
२. एक अनुसन्धानका अनुसार टिभी स्क्रिनको अगाडि दुई घण्टा भन्दा बढी समय खर्च गर्नु हानिकारक छ तर कोरोनाको समयमा अनलाइन कक्षाका कारण बच्चाहरूको स्क्रिन समय बढेको छ । बच्चाहरूले प्रायस् टिभी हेर्दा उनीहरूलाई चाहिने भन्दा बढी खाइन्छन् । यसले मोटापा बढाउँदछ। यसलाई रोक्नको लागि बच्चाहरूलाई खाना खाने समयमा टिभी नराख्नुहोस् र सुत्ने दुई घण्टा अघि ग्याजेटहरूबाट टाढा नराख्नुहोस् ।
३‍‍. अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा केटाकेटीलाई शारीरिक कार्य गर्न सोध्नु हो । यसमा घरेलु कामहरू पनि समावेश हुन सक्छ । यस बाहेक, बच्चाहरूलाई योग, स्किपि बलम र अन्य शारीरिक अभ्यास गर्न लगाउनुहोस् । यदि सम्भव छ भने, आमाबाबुले उनीहरूसँग दौड, कबड्डी, ब्याडमिन्टन जस्ता खेलहरू खेल्छन् ।
प्रकाशित :श्रावण ५, २०७८ मंगलवार - ०६:४०:००